Mumwe mukomana muKentucky akabudirira kuburitsa mari inokwana kutenga yake yepamoyo pal Casious imbwa, chipfuwo wiricheya. Ryder Mconathy ndiye mwana wezuva iri; imbwa yake yakaonekwa iine myelopathy gore rapfuura mushure metsaona pamasitepisi, iyo yakaremadza imbwa zvachose.
Wechidiki Ryder akaunganidza mari yakakwana kuti atenge pal yake a wiricheya nekutengesa magoge ake ematoyi uye macheki anounganidzwa.
Izvi zvinoenda kukuratidza kuti vana vanogona kuva neidziviriro tsitsi kumhuka, uye zvakare zvinoratidza izvo kugamuchirwa kunogona kuita, vamwe vanhu vangangodaro vakafunga kuisa imbwa pasi, asi vamwe vakaita saRyder, vagamuchire sezvavari uye fambira mberi nehupenyu hwavo.
Yekutanga Nyaya naHuffington Post
kupinda Izvi re muna Mawiricheya asingaremi, Retail, hwiricheya, Wiricheya Nhau uye tagged tsitsi dzemwana, kuremara, imbwa wheelchair, isina kurema wheelchair, kufamba, famba, wiricheya, nhau dzewiricheya, mavhiripu.